Ihe ntanetị ọhụụ ọhụrụ nke Xiaomi na-enye ohere inye batrị mAh 4.000 na nkeji 19 | Gam akporosis
Ihe ọhụrụ Xiaomi na-akwụ ụgwọ na-enye ohere ịnweta batrị 4.000 mAh na minit 19
Ụlọ Ignatius | | Ngwa gam akporo, Xiaomi
Ọ bụ ezie na teknụzụ anyị nwere ike ịchọta n'ime smartphones agbanweela ọtụtụ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, batrị ka na-arụ ọrụ nke ọma dịka afọ iri abụọ gara aga. Nke a amanye ndị nrụpụta iji mejuputa ndozi na ndị nhazi na Apple na Google, gbakwunye mmụba ndị ahịa na sistemụ arụmọrụ ha.
Iji belata oge ị na-akwụ ụgwọ, ndị nrụpụta ahọrọla iji mejuputa usoro ngwa ngwa, usoro ndị ahụ na-enye ohere ka anyị belata rue naanị nkeji ole na ole. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ikuku na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa, anyị ga-ekwu maka sistemụ ọhụụ ọhụrụ nke Xiaomi, sistemụ ikuku ikuku 80W nke na-enye anyị ohere ịgba batrị 4.000 mAh na-erughị nkeji iri abụọ.
Ọ bụrụ na anyị kwesịrị ịgba ụgwọ ekwentị anyị mana anyị enweghị tanto tiempo Nke a na usoro ga-ana ọkara batrị na dị nnọọ 8 nkeji. A na-achọta ndekọ gara aga nke oge na ikuku ikuku na Xiaomi Mi 10 Ultra, yana ike nke 50W, teknụzụ nke mere ka ọ kwụọ 100% nke batrị 4.500 mAh na 40 nkeji.
Ka ọ na-erule afọ 2021, a na-atụ anya ka smartphones ndị nwere ikuku ikuku na 100W rute ahịa, ihe dị ka ọ gaghị ekwe omume afọ ole na ole gara aga, ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na anyị nọ na 80W, o yikarịrị ka 100W ga-abịa n'afọ ọzọ, ọbụlagodi na ọ dị na njedebe. Usoro ọhụụ ọhụrụ a nwere ike iru Xiaomi Mi 11 ahịa ahụ mgbe ebido ya na ahịa na mbido afọ.
Mbibi batrị maka arụmụka
Ihe ọ bụla iji mee ka usoro batrị na-agba ọsọ jikọtara ya na mbibi ngwa ngwa nke otu. Okpomọkụ bụ nọmba onye iro ọha nke 1 nke batrị, ikpo ọkụ nke na-egosi mgbe a na-eji usoro nkwụ ụgwọ, ma ọ bụ site na eriri ma ọ bụ na-enweghị eriri, na ike dị ukwuu.
Oppo kwetara na ihe ngwọta 125W na-ebu ngwa ngwa na-ebelata ikike batrị na 80% mgbe 800 ụgwọ cycles, ọtụtụ na-agba ọkụ cycles, ebe ọ bụ na ha gụnyere ihe karịrị afọ 2 nke ebubo kwa ụbọchị na okpomọkụ dị elu. Afọ abụọ bụ ezigbo ndụ nke batrị na smartphones.
N'ihi na sporadik mgbe anyị sonso nwere oge na-ana anyị ama, ndị a wireless Nchaji usoro dị mma, ma ọbụghị mgbe niile. Mgbe ọ bụla enwere ike, anyị kwesịrị izere ya, ọkachasị n'abalị, oge nke oge ebe enwere oge iji chajịa ekwentị na chaja ma ọ bụ ebe nchekwa ikuku dị ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ihe ọhụrụ Xiaomi na-akwụ ụgwọ na-enye ohere ịnweta batrị 4.000 mAh na minit 19
Otu esi eji nyocha nke Telegram
Ihe ngosi 9 dị na Galaxy nwetara Nwelite UI 2.5